काठमाडौं, १३ असोज — बलिउड अभिनेता वरुण धवनले आफ्ना प्रशंसकहरूलाई जुडवा २ हेर्न जाँदा रमाइलो गर्न र धेर नसोच्न आग्रह गरेका थिए । उनको आग्रह मानेर हामी दर्शकले दिमागै बन्द गर्ने त ?
धेर सोच्नु त परै जाओस्, यो भद्दा कमेडी बनाउँदा एकरत्ति दिमाग नलगाएको प्रस्ट हुन्छ ।
सन् १९९७ मा आएको फिल्म जुडवाको अद्यावधिक गरिएको संस्करण हो यो । त्यस फिल्ममा सलमान खानले सस्ता जोकहरू पनि दमदार तरिकाले पेश गरेका थिए । त्यतिखेर फिल्म भयंकर हिट भएको थियो । तर त्यही पुरानो सूत्रलाई दोहो–याएर बासी जोकहरूलाई ताजा बनाउन खोज्नु साह्रै झुर आइडिया हो ।
वरुण धवनले छुट्टिएका जुम्ल्याहा प्रेम र राजाको चित्रण गम्भीर तवरले गरेका भएपनि उनीसँग सलमान खानको जस्तो स्टार पावर र चार्म छैन । उनले कोशिश त गरेका हुन् र उनलाई दिइएका जोकहरू नै बचकाना छन् (जस्तो, अमेरिकाका राष्ट्रपति को हुन् : डोनल्ड डक कि डोनल्ड ट्रम्प ?)
एउटा तस्कर धनी व्यापारीसँग रिसाएबाट फिल्मको कथा शुरु हुन्छ । तस्करले अवैध हीरा भित्र्याउँदै गर्दा व्यापारी मल्होत्रा (सचिन खेडेकर) ले भन्सारका अधिकारीहरूलाई पोल लगाइदिन्छन् । त्यसपछि खलनायक तस्करले मल्होत्राको भर्खर जन्मेका जुम्ल्याहा छोरामध्येका एक राजालाई अपहरण गरेर लान्छ ।
मल्होत्रासँग बदला लिनका लागि उसको छोरा अपहरण गरेको खलनायकले राजालाई अलपत्र छोडिदिन्छ र ऊ मुम्बईका सडकहरूमा हुर्किन थाल्छ । एक महिलाले राजालाई रेलको ट्य्राकबाट उठाउँछिन् अनि आफ्नो छोराका रूपमा ग्रहण गर्छिन् ।
उता अर्को जुम्ल्याहा प्रेम भने लन्डनमा आफ्ना आमाबुवाले दिएको सुखसयलमा हुर्किन्छ । प्रेम भद्र मानिस बन्छ भने राजाले जिन्दगी बाँच्नका लागि दिमाग र मूढेबल दुवै लगाउँछ ।
जुडवा २ का हरेक कलाकारले चाहिनेभन्दा बढी अभिनय देखाउँछन् र संवादहरू पनि कुनै ठिटोले स्कूलको नाटकका लागि लेखेको जस्तो लाग्छ । तस्करले मल्होत्रालाई भन्छ, ‘तैंले मलाई (चकार), मैलै तँलाई (चकार) ।’
फिल्ममा हिरोइनहरू ज्याकलिन फर्नान्डेज र तापसी पन्नु सुन्दर देखिन अनि दिमाग नलगाउनका लागि प्रयुक्त छन् । फर्नान्डेजले विश्वसनीय अभिनय गरेको भएपनि पन्नु चाहिँ यो फिल्ममा कतै हराएझैं लाग्छिन् ।
वरुण धवन चाहिँ सलमान खानको नक्कल गर्दै जतिखेर पनि शर्ट खोलिरहेका भेटिन्छन् । फिल्मले हँसाउन नसकेपछि वरुणलाई शर्ट खोलेर दामी शरीर देखाउन लगाइन्छ । उनी नांगै फाइट गर्छन् अनि गीतमा नाच्छन् पनि ।
एउटै कुरा हेरिरहनुपर्दा दर्शकलाई झ्याउ लाग्छ ।
शारीरिक कमेडी पनि भद्दा लाग्छ । राजाको साथीका रूपमा राजपाल यादवलाई भकभके पात्र बनाइएको छ । त्यसले एकरत्ति हँसाउँदैन ।
अनु मलिकका हिट गीतहरू 'ऊँची है बिल्डिङ' र 'टन टना टन'को रिमिक्स चाहिँ रमाइलो छ ।
तर जुडवाका मूल नायक सलमान खानले यस फिल्ममा गरेको क्यामियोले समेत यसलाई बचाउन सक्दैन ।
फिल्म : जुडवा
कलाकार : वरुण धवन, ज्याक्लिन फर्नान्डेज, तापसी पन्नु, राजपाल यादव, सचिन खेडेकर
निर्देशक : डेभिड धवन
अवधि : १६० मिनेट
रेटिङ : पाँचमा दुई तारा
अन्तिममा आएर बजेट खर्चको बाढी, आलोचनाबाट जोगिन सूचनासमेत लुकाइयो काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर तीव्र रूपमा बजेट खर्च गरेको छ । शनिवारसम्म कुल बजेटको ७७ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले मंगलवारसम्म करीब ८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । विदाको ...